Kolikoly sy famarotana tany Nitory ny fanjakana ny CRN
Haino aman-jerim-panjakana TVM sy RNM Natao hanabadoana ny Malagasy sisa ?
Tsy natao hanenjehana na hanaratsiana ny haino aman-jerim-panjakana fa maro ny lesoka mila fanitsiana, indrindra ny fitanilana amin’ny mpitondra. Io no tokony ho lohalaharana amin’ny fanabeazana vahoaka, izay hany afaka mandrakotra an’i Madagasikara.
Fiaran’ny Masoivoho Frantsay Fa nanao inona tao Tsimbazaza ?
Nahagaga ny nahita ny fiaran’ny Masoivoho Frantsay nihantsona teny amin’ny Lapan’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza omaly.
« Assurance vie » Maro ny Malagasy efa liana aminy
Maro ny Malagasy efa tonga saina ka miezaka mitsinjo ny vody andro merika ankehitriny. Araka izany, tsy vitsy intsony no miditra amin’ireny sehatra fiantohana isan-karazany ireny.
Malagasy maro an’isa Tsy miaina fa manavotr’aina
Miteny ny sary rehefa mijery ny zava-misy eto an-drenivohitra sy ny manodidina fa tena maro be ireo Malagasy mitrongy vao homana; izany hoe mila miasa mafy isan’andro manomboka amin’ny 5 ora maraina ka hatramin’ny 6 ora hariva vao mahita hanin-kohanina isan’andro
Tafapetraka omaly teny amin’ny birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly (Bianco) Ambohibao ny fitoriana avy amin’ny Komitin’ny fampihavanam-pirenena (CRN) tarihan’i Tabera Randriamanantsoa.
Manahy trangana kolikoly avo lenta tamin’ny famarotana ny tany misy ny « villa Elizabeth » sy ny famarotana tany etsy sy eroa ataon’ny fanjakana izy ireo. Tanim-panjakana miisa 5 be izao no tsy mazava intsony ny momba azy fa ao ireo efa lafo ary ao ireo an-dalana ho amin’izany. Ny Villa Elizabeth Ivandry, ny minisiteran’ny asa vaventy teo aloha eny an-toerana ihany koa, izay efa lasa Hotely, hoy ity filoha ity, ny Nosy Ampisikina ao Vohemar, ny torapasik’i Toliara ary ny trano fonenan’ny praiminisitra teo aloha, Pierrot Rajaonarivelo, eny Mamory Ivato moa ireo hangatahana fanadihadiana ireo. Noraisin’ny Bianco an-tanan-droa, hoy ny CRN, ny fangatahanay ary fantatray fa tia tanindrazana avokoa ny tale jeneralin’ity rafitra ity sy ny mpiara-miasa aminy ary hiara-hiasa akaiky izahay manomboka izao. Amin’ny herinandro dia efa hanomboka ny fanadihadiana ny Bianco, hoy ny fanazavana, ary manentana ny vahoaka hanao rodobe hiaro ny taniny fa tsy hanan-tany intsony isika afaka 5 taona raha izao no mitohy.Feno ny fepetra ilazana fa misy ny famadihana tanindrazana sy famarotana tanindrazana ka mitory ny mpitondra fanjakana amin’izao fotoana ny CRN tarihan’i Tabera Randriamanantsoa izay anisan’ireo olona tena akaiky ny Pr Zafy Albert fony fahavelony. Manantena ny Bianco hanadihady tsara io raharaha io izahay, hoy i Tabera Randriamanantsoa. Zava-doza ny famarotana tanindrazana ary vao miha ratsy raha tafiditra ao anatin’ny kolikoly ny manampahefana sasany eto amin’ny firenena. Milaza ny tsy hihemotra amin’ity zavatra ataony ity ny CRN mba hipoiran’ny marina sy ny rariny izay zavatra tena nanan-danja tokoa tamin’ny Pr Zafy Albert, hoy izy ireo.